Nzira yekuti uve mutengesi anobudirira chaizvo paAmazon?
Mumwe mutengesi wekutsvaga muIndaneti anotengesa kuAmazonese anofanira kugara achingoita zvisarudzo zvakanaka. Uye kana zvasvika kune zvakakonzerwa nekugadzirwa kwekugadzirwa kwezvinhu, kuchiitisa kunze kwezvose zvakakosha zvinyorwa deta dhesi pamwe chete nekukwikwidza kunokosha kwekunzwisisa - hakuzombotori bhizinesi rako rekutumira-kusvika kune imwe yenzira yakanaka yekuenderera mberi kwekuwana mari. Saka, ngatitarisane nayo - kana iwe uchida kuzviona iwe sekukuru-time mutengesi kuAmazon achibatsirwa nekuenderera mberi kwekufamba kwevatengesi vekutengesa, nguva yakakwirira iwe wakasarudza kodzero yekodzero yekutsvakurudza zvigadzirwa uye pakupedzisira uwane chigadzirwa chako chakanyatsogadziriswa.
Nzira iyo, iwe uchava nemikana yakasimba yekugara pamusoro pekutsvaga kwemagetsi - install wired network. Pakupedzisira, kupomesa mamwe webhutta ku Amazon yako mazita, izvo zvinogona kuguma muzinga rakakwirira rekushandura, mu-kutendepa kupa rupo kuhuwandu hwekusimudzirwa kwepamusoro pamakwikwi ekukwikwidza.
Uye pasi ini ndichakuratidza iwe zvimwe yezvakanakisisa zvinyorwa zvishandiso zvinowanika mukana wakazaruka kusvika ikozvino. Vatengesi vose vanotengesa kuAmazon vanofanira kuziva pamusoro pazvo, ndine chokwadi. Cherechedza, zvisinei, kuti handisi zvekukurudzira kana kuti Mwari arambidze kusunungura chero ipi zvayo yemuInternet software kana maAmerica zvigadzirwa zvekutengesa nekuda kwekutengeserana. Kungoita samasamaria akanaka achida uye akagadzirira kugovana zvimwe zvandaimboita maitiro ekugadzirisa mauri nemwi varume. Ndapota muda uye munzwirwe nyasha, ini pane imwechete-stop-shop solution yeAmazon trade - SECockpit. Regai tione kuti chii.
Ndiyo izwi rekutanga rekutsvakurudza ruzivo ndinoda kukumiririra nhasi. Mukati, SECockpit haisi chete chinhu chikuru chinonzi finder. Kuti zvive zvakanyatsojeka, ibasa rakazara rekutsvaga paIndaneti rakagadzirirwa kwete Amazon chete, asi nekugadzirisa zvimwe zvinyorwa zveEcommerce zvinyorwa paInternet kuitira kuti zvionekwe pakati pepamusoro mitsva yekutsvaga. Ndinoreva kuti iyi yakawanda yakawanda inowanikwa muInternet inokonzera pamwe chete zvose zvingangodaro zvinodiwa sevatengesi vekuchenjera vachitengesa kuAmazon.
Pano pane zvimwe zvikomborero zvakanakisisa zvandakawana nokuda kwezvangu zvinyorwa zvinyorwa:
nokukurumidza kuumba mazita makuru ekuti angakunda mazwi echigamba;
kunzwisisa maitiro makuru ekutsvakurudza kwenguva refu muswe uye kuwana rubatsiro rwemashoko anokosha;
kuzarura mimwe mikana yekuvandudza mikana - nekunzwisisa kupikisana pamusoro pemashoko makuru anotora zvakananga kubva kune vatengesi vanotengesa mumutambo wako kana kuti niche yemari kuAmazon;
chengetedza ikozvino mazwi ezvinyorwa - zvikamu zviviri zvekutsvaga kwako, nekufambira mberi kwakanakisisa kwevadzivisi vako vepedyo vakatove vakatsanangurira chero chero chinhu chipi nechipi chinonyanya kushandiswa kana kunyatsoshandiswa kwenguva yakareba muswe;
inobatsirwa kubva kune imwe nyaya yakanyanyisa uye isingagoni kuongororwa, zvichida kuburikidza nemazuva makumi matatu ekuedzwa anowanikwa mukusununguka. Zvinosuruvarisa, kuti uwane zvimwe zvinhu zvakasimudzwa pane zvimire, iwe uchada kudarika nzira yavo yokubhadhara, uye zvekare, kuripa mari imwe neimwe pamwedzi.